Nezvedu - Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd.
Hangzhou Testsea biotechnology co., LTD.ibhizimusi renyika repamusoro-soro, riri muHangzhou. Testsea ine vakawanda vekutsvagisa uye mushandi akapedza kudzidza kuzhejiang yunivhesiti uye mhiri kwemakungwa. Testsea inyanzvi mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzirwa uye kutengesa kwezvinhu zvakabikwa zvekuongororwa kwekurapa uye kuongororwa kwekuchengetedza chikafu. isu takanyorera makumi maviri nemasere emhando dzematendi anovhara kuongororwa kwekurapa, kuchengetedzwa kwechikafu nekukurumidza kuyedzwa, chikafu enzymatic immunoassay uye gadziriro itsva ye enzyme. Testsea inopa mhinduro dzakakwana dzesainzi masangano ekutsvagisa, mabhizinesi, masangano ekutsvagisa uye mamwe masangano epasirese. Testsea yakazara bhizinesi nzvimbo inodarika zviuru zviviri zvemamita, kusanganisira mazana mana emamita eGMP 100,000-chikamu chekuchenesa musangano, kambani yedu iri kunyatso kutevedzera ISO13485 uye ISO9001 yemhando yepamusoro manejimendi system kushanda nekutsvaga, kugadzira, kutonga kwemhando, mari, kutengesa mudzimba uye kune dzimwe nyika. kutengesa etc. Zvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa nevashandisi vakawanda mudzimba uye kunze. Uye zvakare, isu tinomisa hukama hwakanaka hwebhizinesi nemayunivhesiti mazhinji epamba uye in vitro diagnostic kugadzira mabhizinesi, kunyangwe nekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, Europe, Africa, Latin America nedzimwe nyika.
Testsea ine timu yekutsvagisa uye yekusimudzira inotungamirwa nanachiremba uye masters vane hunyanzvi vashandi uye zvakanaka-zvishandiso nzvimbo. Kukwanisa kugadzira recombinant antigen kwasvika 18g / mwedzi.
Testsea yekutsvaga ye "kutendeseka, hunhu, mutoro" pfungwa uye kutevedzera mhando, chinangwa chekushandira nzanga uye kugara ichigadzira mitsva yemhando yepamusoro yekuongorora zvinhu nesimba.
Rapid diagnostic test yembereko, chirwere chinotapukira, mushonga wekushungurudzwa uye veterinary.
Rapid diagnostic tests (RDTs) imhando ye-point-of-care diagnostic, zvichireva kuti aya assays anoitirwa kupa mhedzisiro yekuongorora zviri nyore uye nekukasira kumurwere achiri panzvimbo yehutano, nzvimbo yekuongorora, kana mumwe mupi wehutano. Kugamuchira kuongororwa panguva yekutarisirwa kunoderedza kudiwa kwekushanya kwakawanda kuti uwane mhinduro dzekuongorora, nekudaro kuvandudza hunyanzvi hwekuongororwa uye mikana iyo murwere achawana kurapwa, kuderedza kutsamira pakurapa kwekufungidzira, uye kuderedza njodzi yekuti murwere anozorwara asati atanga. kuongororwa kwechokwadi kunoitwa. Kurumidza kuyedzwa kunoshandiswa munzvimbo dzakasiyana-siyana dzekutarisira-kubva kudzimba kuenda kumakiriniki ekuchengetedza ekutanga kana makamuri ekukurumidzira - uye mazhinji anoda zvishoma kana midziyo yemurabhoritari kana kudzidziswa kwekurapa.
Iyo Hangzhou Testsea Biotechnology Co. , LTD. Hot Products - Sitemap